Lorcaserin (Belviq) ntụ ntụ (616202-92-7) hplc≥98% | AASraw Fat Loss
/ ngwaahịa / Ọla abụba / Lorcaserin (Belviq) ntụ ntụ
Rating: SKU: 616202-92-7. Category: Ọla abụba
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkwa nke Lorcaserin (Belviq) (616202-92-7), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Lorcaserin Okwu Mmalite
Ịmepụta ọgwụ dị mma ma dị mma maka ọgwụ ọjọọ bụ ọrụ siri ike. Mgbalị ndị dị n'oge gara aga abịawo n'ọtụtụ mmetụta dịka mmebi obi. N'ụzọ dị mwute, nnyocha ọhụrụ na-ekwu na ịkwa ụta dị arọ nwere ike inyere gị aka ịkwụsị ibu arọ n'ejighị ịchụ àjà ahụike nke obi gị. Lorcaserin bụ ọgwụ mgbu nke na-egbu egbu, nke FDA kwadoro na 2012. Ma gịnị bụ lorcaserin? Ọfọn, n'okpuru bụ nkọwa miri emi nke ọgwụ, usoro ya na ihe onwunwe ya, ojiji ya, usoro ọgwụgwọ, nlekọta ya, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Aha aha: Lorcaserin / BELVIQ (lorcaserin hydrochloride)
Lorcaserin (Belviq) uzuzu vidiyo
I.Lorcaserin (Belviq) ntụ isi Ihe:
aha: Lorcaserin (Belviq) ntụ ntụ
Usoro Molecular: C11H14ClN
Molekụla arọ: 195.692
N'okpuru ebe a bụ usoro iheomume nke ụda okwu na 3-D conformation.
Njirimara Chemical nke Lorcaserin (belviq) (CAS 616202-92-7)
N'okpuru ebe a bụ nchịkọta kemịkal nke Lorcaserin (belviq); egosiri ha na tebụl dị n'okpuru ebe a maka nlele ngwa ngwa.
Aha aha Uru Ngwongwo
Ọnụ na-ejikọta ọnụ-ụkọ ọnụ ọgụgụ 1
Atomope Atom gụọ 0
Ngụkọta Ụdị Stereocenter na-adịghị edozi 0
Dere Bond Stereocenter agụ 0
Achọpụta Atom Stereocenter agụghị 0
Achọpụta Atom Stereocenter agụ 1
Igwe Atom dị egwu 13
Akara Iwu 0
A na-emezi Nhazi ahụ ezi
Nkịtị ziri 195.081 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 195.081 g / mol
Gburugburu Ebe Gburugburu Ebe Obibi 12 A ^ 2
Ọnụ ọgụgụ a pụrụ ịgbanwe agbanwe 0
Igwe Mmuta Acondor Bond Acceptor 1
Mmiri na-enye mmiri ọgwụ 1
molekụla arọ 195.69 g / mol
Ndị na-emekọrịta ihe
pKa = 9.98 (bụ)
Nkọwa dị mfe nke ntụ ntụ Lorcaserin HCL
Lorcaserin (Belviq) bụ ọgwụ na-egbochi agụụ na-agụ agụụ nke Arena Pharmaceuticals wepụtara. O sitere na otu ogwu ndi ana akpo seontonin agonist. Emepụtara ya iji nyere gị aka ka afọ ju gị ma i rie nri pere mpe. Ọ na-egbochi agụụ site na ime ka 5-HT rụọ ọrụ2C ndị nabatara, nke bụ ụdị ndị na-anabata serotonin na mpaghara ụbụrụ (hypothalamus) nke na-achịkwa agụụ. Mgbe ha gosipụtara ahụ gị ka obi dị gị ụtọ, ị ga-eri obere, ya mere ọ ga-eme ka ọ ghara ịdị ogologo oge.
Belviq, onye aha ya bụ R (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride hemihydrate, bu n'uche ka ewere ya ọnụ. Obu arọ ya bụ 241.16 g / mol, ihe nchịkọta ya bụ C11H15Cl2N • 0.5H2O. Nhazi ya bu nke a:
Mkpebi nke Lorcaserin hydrochloride hemihydrate na mmiri dị elu karịa 400 mg / mL. Mbadamba Belviq nwere milligrams 10.4 nke crystalline lorcaserin hydrochloride hemihydrate (ọcha na-acha ọcha ntụ ntụ), nke hà nhata 10.0 milligrams anhydrous lorcaserin hydrochloride. O nwekwara ihe ndị ọzọ, gụnyere magnesium stearate NF, talc USP, FD & C Blue # 2 aluminom ọdọ, titanium dioxide USP, polyethylene glycol NF, polyvinyl alcohol USP, colloidal silicon dioxide NF, croscarmellose sodium NF, microifiedstalline cellulose na hydroxypropyl cellulose NF.
Ihe oru nke Lorcaserin
Dịka ntụziaka nduzi nke Food and Drug Administration (2007), Lorcaserin nwere ike inyere ndị okenye aka imeri ọnwụ na-efu. A na-ekwu ọgwụ ọgwụ ọjọọ a na-arụ ọrụ nke ọma mgbe e jikọtara ya na mmega ahụ dị elu yana obere nri calorie. Ọ nwere ike inyere aka na njedebe na-adịghị ala ala, karịsịa na ndị buru ibu (ọ dịkarịa ala 27 kg / m2), ma ọ bụ obese (BMI nke ọ dịkarịa ala30 kg / m2). Nri a nwekwara ike inyere ndị nwere nsogbu ma ọ bụ karịa metụtara, dịka ụdị ọrịa shuga 2, dyslipidemia, ma ọ bụ ọbara mgbali elu.
Lorcaserin bụ ọgwụ mgbochi agụụ nke na-eme ihe dị ka 5-HT2C onye agonist na-anata ihe na hypothalamus na nhọta nhọrọ nke ugboro iri na ise ọzọ maka 5-HT2C ndị natara karịa 5-HT2A na onye na-eji 100 ugboro arụ ọrụ ọrụ elu maka 5-HT2C ndị natara karịa maka 5-HT2B.
Ndị natara 5-HT2C dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị na ụbụrụ mmadụ ma enwere ike ịchọta ya na thalamus, hypothalamus, cortex, hippocampus, choroid plexus, cerebellum, na amygdala. Mmetụta nke ndị natara 5-HT2C na hypothalamus na-arụ ọrụ POMC (proopiomelanocortin) na-akwalite nbelata ibu site na satiety. A na-akwado arụmụka a site na nnwale ụlọ ọgwụ egosiputara na nyocha ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na a na-echekarị na ndị natara 5-HT2C na-enyere aka n'ịchịkwa agụụ, ihe nzuzo endocrine, na ọnọdụ, a maghị kpọmkwem etu esi eme ihe na usoro agụụ.
Nabatara EC50 [nM] Ki[nM]
Jiri ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL
Ọ bụrụ na anyị atụle ezigbo reviews nke Lorcaserin n'ebe ahụ, mgbe ahụ, nke a bụ ihe kacha mma na-atụ egwu ọnwụ na ahịa taa. Ụfọdụ ndị buru oke ibu, ya bụ, ndị nwere nsogbu ahụike ma ọ bụ ndị buru oke ibu nwere ike ịbara uru site na ngwaahịa a.
Mgbe a na-eji ya na usoro mmemme nke dọkịta na-akwado, usoro ihe oriri nke obere calorie, na mgbanwe ndụ, Lorcaserin nwere ike inyere mmadụ aka ime ọtụtụ ihe karịa ịghara ịdị arọ - ọ nwere ike inye aka belata ọtụtụ nsogbu ahụike metụtara oke oke, gụnyere ọbara mgbali elu, ọrịa shuga, ọrịa obi, na ọnwụ mbụ.
Dị ka Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrịa Na-ahụ, naanị 5 na-efu na 10 pasent nke ngụkọta ahụ dum nwere ike inye ụfọdụ uru ahụike dịka mmụba nke shuga ọbara, cholesterol ọbara, na ọbara mgbali.
Usoro onu ogwu nke azu azu nke Lorcaserin HCL
E kwesiri ka ndị okenye buru mkpụrụ ọgwụ abụọ kwa ụbọchị. Ya mere ị ga-eji ọgwụ 60 kwa ọnwa. Dị ka FDA si kwuo, mmadụ kwesịrị iji ọgwụ ahụ mee ihe n'oge ndụ ya fọdụrụnụ iji kwado ịdị arọ.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na a ghaghị ịhụ nsonaazụ ọma mgbe izu 12 gasịrị. Ọ bụrụ na ị ga-efu ma ọ dịkarịa ala 5 pasent nke ụbụrụ gị mgbe ọ bụla, a gwara gị ka ị kwụsị iji ogwu ahụ. Ọbụna na iji ya eme ihe, ọ dịkarịrị ka ị ga-enweta ma kwadoo ọnwụ ọnwụ.
Nlekọta anya nke Lorcaserin HCL
Ọ dị mma icheta na onye nlekọta ahụike gị edepụtara ọgwụ a n'ihi na ha ekpebiela na uru ị ga-enweta dị elu karịa ihe egwu nke nsonaazụ. Imirikiti ndị na-a thisụ ọgwụ a adịghị egosipụta mmetụta dị egwu.
Tupu ị were lorcaserin, mee ka onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ dọkịta mara ma ị na-anabata ọgwụ ahụ; ma ọ bụ na ị nwere ihe ọ bụla ọzọ allergies. Lorcaserin nwere ihe ndị na-adịghị arụ ọrụ nke nwere ike ibute mmeghachi omume nfụkasị ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ. Jụọ onye na-ere ọgwụ gị ka o nye gị nkọwa ndị ọzọ.
Tupu ị takeụ ọgwụ a, gwa onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ dọkịta gị banyere akụkọ ahụike gị, ọkachasị nke nsogbu akụrụ, ọrịa shuga, nsogbu imeju, ọrịa obi (gụnyere ngọngọ obi, ọrịa obi obi, obi mgbawa, nwayọ obi) nsogbu nke nwere ike ịbawanye ohere nke ere na-egbu mgbu / ogologo oge na ụmụ nwoke (gụnyere amụ amụ, ọrịa Peyronie, ọtụtụ myeloma, sickle cell anaemia, leukemia).
Mkpụrụ ọgwụ a na-ebelata agụụ nwere ike ime ka ị belata echiche gị ma ọ bụ nhụjuanya. Marijuana ma ọ bụ mmanya na-aba n’anya nwere ike ime ka ihe ndị a ka njọ. Ejila igwe, ụgbọala, ma ọ bụ mee ihe ọ bụla nke chọrọ ịmụrụ anya ruo mgbe ị nwere ike iji nlezianya mee ya. Kwụsị mmanya na-aba n'anya ma gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị na-eji wii wii.
Ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ ịwa ahụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgwa dọkịta gị ma ọ bụ dọkịta gị banyere ngwaahịa niile ị na-ewere (gụnyere ọgwụ ndị na-abụghị ọgwụ na-ede ọgwụ, ngwaahịa ọgwụ, na ọgwụ ọgwụ).
Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa shuga, ọgwụ mgbochi ọnwụ a nwere ike imetụta shuga shuga gị. Gbalia ihu na inyocha ogo shuga obara gi mgbe obula dika enyere gi aka ma gwa ndi dibia ihe ndia. Mee ka dọkịta gị mara ma ọ bụrụ na ị nwere obere mgbaàmà shuga dị n’ọbara. Onye ọkachamara ahụike gị nwere ike ịchọ ịgbanwe usoro mmega ahụ gị, nri gị ma ọ bụ ọgwụ shuga.
A gaghị ewere ọgwụ a n'oge ime ime n'ihi na ọ nwere ike imerụ nwa ebu n'afọ. Jụọ dọkịta gị banyere ngwa nke ụdị ịtụkwasị obi nke ịmụ nwa. Ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ tụụrụ ime, gwa onye ọkachamara ahụike gị ozugbo.
Ruo ugbu a, amabeghị ma ọgwụ a ọ na-abanye n'ime mmiri ara ara. Iji gbochie ohere nke ihe nwatakịrị nwere ihe ize ndụ, inye nwa ara mgbe ị na-eji ọgwụ a akwadoghị. Jide n'aka na ị gakwuru dọkịta gị tupu ị breastụọ ara.
Jiri nlezianya gụọ Akwụkwọ Ozi Onye Ọrụ ma ọ bụrụ na ọ dị site na dọkịta gị tupu ịmalite iji lorcaserin na oge ọ bụla ị nwetara. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, jụọ onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ dọkịta gị.
Were ọgwụ na-ebelata agụụ nri a n'ọnụ ma ọ bụ na-enweghị nri dịka onye na-ere ọgwụ na-ekwu, ọ na-abụkarị ugboro abụọ kwa ụbọchị. Jiri ọgwụ a mgbe niile ka ị nweta ọtụtụ uru na ya. Iji nyere gị aka icheta, were ọgwụ ahụ n'otu oge kwa ụbọchị.
Lorcaserin bụ ọgwụ ọjọọ. Emela ka ọgwụ ahụ dịkwuo elu ma ọ bụ were ọgwụ a karịa ugboro ugboro. Ọnọdụ ị nwere nwere ike ghara ime ka ọ dịkwuo ngwa ngwa, ihe ize ndụ nke mmetụta ndị ọzọ nwere ike ịbawanye elu.
Mmekọrịta ọgwụ ọjọọ siri ike nwere ike ime mgbe a na-ejikarị ọgwụ ọjọọ eme ihe na ngwugwu ọgwụ. Gwa dọkịta gị banyere ọgwụ niile ị na-eji ugbu a, na ndenye ọgwụ ọ bụla ị na-amalite ma ọ bụ kwụsị iji.
A naghị anabata mpempe ọnwụ nke na-eme ka ọkọlọtọ Lorcaserin ghara iji ya mee ihe site n'aka ndị dị obere karịa 18 afọ.
Kedu ka m ga - esi were ntụ ntụ Lorcaserin HCL?
Ejila iwe, gbajie, ma ọ bụ kpochapụ ihe mbadamba mgbasa ozi. Naanị iwe ya dum.
Ntughari nke nkwonkwo nkwonkwo nke Lorcaserin bụ akụkụ nke usoro ọgwụgwọ zuru oke nke ga-agụnye mmega ahụ, ịchịkwa ibu, nri, ma na-anwale ọbara shuga gị. Soro ọgwụ gị, ihe oriri, na mgbatị ahụ na-arụsi ọrụ ike.
Na-echekwa ọgwụ ndị dị na ebe okpomọkụ na okpomọkụ na mmiri.
Debe ihe ndekọ nke uru ọgwụ ndị a na-eji na karama niile. Ngwongwo iku ume nke na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ ọgwụ ọjọọ, ma ị kwesịrị ịma mgbe ọ bụla mmadụ na-eji ọgwụ gị na-enweghị ọgwụ ma ọ bụ na-ekwesịghị ekwesị.
Esola onye ọ bụla ọzọ na-akọrọ gị ọgwụ. Debe ọgwụ ahụ n'ebe a na-enweghị onye ọzọ nwere ike inweta ya.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - atụgharị uche na ọgwụ Lorcaserin?
Nanị nyochaa ngwa ngwa ị chetara ozugbo. I kwesiri ighota ogwu ozo ma oburu na oge maka usoro onu ozo di nso. Ejila ọgwụ ọzọ iji dozie ụbụrụ a tụfuru.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ịghachitere Lorcaserin?
Chọọ maka enyemaka mberede mberede ma ọ bụ kpọtụrụ akara enyemaka Poison na 1-800-222-1222.
Kedu ihe m kwesịrị izere ịnara mgbe m na-ekwu okwu?
Enwela ihe ọ bụla ọzọ na-abaghị uru ma ọ bụ ọgwụ ndenye na-ederede na-enweghị ndụmọdụ dọkịta gị. Nakwa, egbula ọgwụ ma ọ bụ ụbụrụ mgbe ị na-ewere ọgwụ mgbochi.
Kedu ọgwụ ndị ọzọ nwere ike imetụta ụda olu?
Ọgwụ ndị na-esonụ nwere ike imetụta otú lorcaserin si arụ ọrụ:
Otu "triptan" nke bu ọgwụ isi ọwụwa migraine – dị ka Maxalt, Zomig almotriptan, rizatriptan, sumatriptan, frovatriptan, zolmitriptan, Imitrex, na ndị ọzọ.
ụdị ụdị antidepressant ọ bụla
erectile dysfunctiondrugs– Levitra, Viagra avanafil, Cialis, sildenafil, tadalafil, na ndị ọzọ;
tryptophan (nke a makwaara dị ka L-tryptophan);
ụkwara ma ọ bụ ọgwụ oyi nke dextromethorphan nwere; ma ọ bụ
ọgwụ iji gwọọ ọrịa ọgụgụ isi, ọnọdụ ma ọ bụ nsogbu nchekasị.
Ihe edere n'elu adighi ike. Ọgwụ ndị ọzọ nwere ike imetụta ụda olu, ma ọ bụghị ihe niile nwere ike ịmekọrịta na ntuziaka ọgwụ a.
Akụkọ banyere BBC na nchekwa na arụmọrụ nke Lorcaserin HCL (CAS 616202-92-7)
Enwere ọtụtụ akụkọ BBC banyere Lorcaserin banyere ọ bụghị naanị arụmọrụ kamakwa nchekwa nke ọgwụ ahụ. Dị ka BBC si kwuo, nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya, bụ nke e bipụtara na New England Journal of Medicine, na-egosi ndị mmadụ na-eji ọgwụ mgbochi agụụ na-egbu egbu na-efu ihe dịka 8.8lb (4kg) n'oge ihe ndekọ dịka afọ atọ na ọkara. Ihe nchọpụta nke nchọpụta a gosipụtara na o doro anya na ọ bụ otu n'ime ọgwụ ndị kacha njọ.
Akụkọ ahụ na-ekwukwa na ọgwụ ahụ ebe ọ na-arụ ọrụ site na ịkwụsị agụụ, etinyela ndị ọrụ n'ọnọdụ dị egwu nke ọnọdụ obi.Ọmụmụ ihe a na-ebipụta wee soro onye na-ebu nje 12,000 ma ọ bụ ndị buru oke ibu na USA n'elu ọnwa 40.
Mgbe afọ atọ na ọkara gasịrị, ndị okenye na-ewere ụlọnga dị okpukpu atọ karịa ka ha ghara ịdọrọ pasent ise na pasent nke ozu ha karịa ndị na-enweta placebo, dị ka otu n'ime ndị nchọpụta bụ isi nke ọmụmụ ahụ, Dr. Erin Bohula si kwuo.
Nnwale ndị e mere na valvụ nke obi adịghị egosipụta ọdịiche dị iche iche dị iche na nke ndị na-ewere placebo. N'iburu n'uche na nke a bụ isi nchegbu mgbe ọ na-abịa na nchebe nke ọgwụ ndị ọzọ na-egbuke egbuke, ịkọ ụda nwere ike ịbụ nnukwu pill ọnwụ.
Ndị okenye na-a medicineụ ọgwụ nọkwa n'ọnọdụ dị ala nke ọrịa shuga nke ụdị 2. Mkpụrụ ọgwụ ahụ na-akwụ ihe ruru £ 155-225 ($ 220-290) kwa ọnwa na US. Lorcaserin na-enye uzo ozo di nma na usoro mmebi iwu di oke dika ogwu ogwu gastric na ndi ozo.
Akụkọ ọzọ BBC gosipụtara bụ nke ndị nyocha na Mahadum nke Aberdeen Rowett Institute mere nyocha gbasara agụụ. Ndị ọkà mmụta sayensị kwuru na nyocha ha mere banyere agụụ na-eduga ha n'otu akụkụ nke ụbụrụ.
Ha chọpụtara na site n'inwe mkpụrụ ndụ ndị ahụ kpọmkwem na ọgwụ ndị ha nwere ike belata nri oriri. Ebe ọ bụ na ụlọnga na-arụ ọrụ site na usoro a, ihe nchọpụtara nke nchọpụta a abụghị nanị meghere ọnụ ụzọ maka ọgwụ ọhụrụ dịka mkpuchi ma kwadoro ihe ndị ọkachamara kwenyere banyere okwu ọnụ-nchekwa ya na arụmọrụ ya.